Cunnooyinka cananaaska ayaa miisaanka si dhakhso leh u lumiya waana la damaanad qaadayaa! | Cuntada Nutri
Cananaaska waa miro leh hanti fara badan runtii waxtar u leh jirka. Waa il fiican oo laga helo antioxidants kuna caan baxay ahaansho dura badan Waxay ka caawisaa sidii looga saari lahaa sunta iyo wasakhda jidhka.
Cunista cananaaska waa kaamil ah oo ku habboon si loo nadiifiyo jirka iyo ka saar dheecaannada xad-dhaafka ah taas oo inta badan keenta miisaanka oo kordha. Si kastaba ha noqotee, la'aanta nafaqada lagama maarmaanka ah waxay keenaysaa in cuntadan la raaco ugu badnaan 4 maalmood, maadaama haddii kale ay soo saari karto dhaawac culus u leh caafimaadka qofka go'aansada inuu sii wado. Ka dib si faahfaahsan ayaan kula hadli doonaa ee cuntadan caanka ah markaa waad arki kartaa waxay yihiin faa iidooyinkiisa iyo khataraha suurtagalka ah.
1 Faa'iidooyinka cunnooyinka cananaaska
2 Muxuu soo jeedinayaa cuntada cananaaska
3 Cunnada cananaaska
3.1 Maalinta koowaad
3.2 Maalinta labaad
3.3 Maalinta sadexaad
4 Qasaarooyinka cananaaska canabkiisa
Faa'iidooyinka cunnooyinka cananaaska
La cunada cananaaska Waxay leedahay faa'iidooyin taxane ah oo ay muhiim kuu tahay inaad ogaato oo ku caawin kara si aad u lumiso miisaanka iyo in la baabi'iyo kiiladaas dheeriga ah ee wax badan kugu dhibaya:
Waa a habka slimming natiijooyinka degdegga ah, maxaa yeelay qaadashada cananaaska waxay ka caawisaa yaree bararka caloosha horeba baabi'i dufanka ururay jirka.
Cananaaska waa durayo fiican markaa way kufiican tahay Si fiican u nadiifi noolaha oo dhan. Qaadashadiisu waxay kaa caawineysaa inaad baabiiso dhammaan sunta iyo nijaasta taasi waa gudaha jirkaaga.
Waa midho leh fiitamiino badan iyo inay ku habboon tahay nadiifinta xubnaha sida beerka ama kilyaha.
Cananaaska wuxuu kuu ogolaanayaa inaad faahfaahin ka bixiso suxuunta aad u kala duwan runtiina waa u macaan tahay waxa ay tahay cunto aad u soo jiidasho leh miisaanka oo yaraada.
Muxuu soo jeedinayaa cuntada cananaaska
Cunnada cananaaska ma soo jeedinaayo wax aan ka aheyn cun cananaaska inta lagu jiro dhammaan cuntooyinka maalintii, kaabista ayaa lagu sheegay qaadashada iyadoo noocyada kale ee cuntooyinka kalooriga ku yar iyo dufan aad u yar oo loogu talagalay miisaanka luminayo hab deg deg ah oo hufan. Cunto noocan ah ayaa qofka u oggolaanaysa si fiican u nadiifi jirkaaga oo dhan, ka wada saaraya nijaasta iyo qashinka taas oo la sameeyo cuntada ka dib.
Marka loo eego cuntadan, kaliya ilaa 3 cunto maalintii iyaga dhexdooda, marka lagu daro cananaaska dabiiciga ah, waa lagu dari karaa ugu badnaan ilaa 400 garaam oo borotiin ah nooca caatada ah sida xaalku yahay digaag, turkey, kalluun ama bakayle. Sidaad arki karto, cunnadan noocan ahi waxay leedahay cillado nafaqo oo fara badan sidaa darteed waa loo oggol yahay oo keliya in la raaco cuntadan ugu badnaan 4 maalmood. Xaaladda sii dheereynta qaabkan miisaanka oo hoos u dhaca maalmo badan, qofka su'aasha ah waa la dhibtoon karaa dhibaatooyin caafimaad oo daran maadaama aysan jidhkaaga siinin nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah inay si fiican u shaqeeyaan.
Waan ku tusayaa tusaale ahaan nooca noocan ah oo ay ka mid yihiin qiyaastii 3 maalmood.
Inta lagu jiro quraacda waad cuni kartaa laba xabo oo cananaaska dabiiciga ah oo ay weheliso rootiga rootiga rootiga oo dhan macmacaan yar.
Cunto ahaan waad cuni kartaa laba xaleef cananaas dabiici ah oo ay la socdaan hilib lo'aad leh broccoli yar oo lagu kariyey khal iyo saliid.
Casho ahaan waad heli kartaa laba giraan naaska la dubay oo ay weheliyaan salad salad ah iyo laba xaleef cananaaska.
Quraacda waad heli kartaa laba buskud oo badar ah, yogurt la jarjaray iyo laba xaleef cananaaska.
Qado 200 garaam oo kalluun salmon ah ku xigta laba xaleef cananaaska.
Casho ahaan waad heli kartaa saladh saladh iyo tuna ah iyo laba xabo oo cananaas ah.
Quraacda waxaad heli kartaa laba buskud oo badar ah, qaxwo iyo laba xabo oo cananaaska dabiiciga ah.
Cunto ahaan 200 garaam oo naaska la dubay khudaar la kariyey iyo laba xaleef cananaaska.
Casho ahaan waxaad sameyn kartaa kareem khudradeed leh celery, artichoke ama dhir iyo laba xabo oo cananaaska.
Haddii aad raacdo qorshahan muddada saddexda maalmood ah, waad heli doontaa si fiican u nadiifi jirkaaga oo dhan, waad iska ilaalin doontaa dheecaanka oo haysaa lumiso kuwaas dheeriga ah intee ku dhibayaan. Waa muhiim inaad taas xasuusato waa cunto nadiif ah sidaas darteedna waa inaysan ka badnaan saddex maalmood.
Qasaarooyinka cananaaska canabkiisa
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in cuntada cananaaska ay leedahay yaraanta nafaqada, marka talo ma aha inaad raacdo in ka badan 4 maalmood. Waa cunto ku caawinaysa tirtira sunta jirkaaga oo miisaankaaga dhaqso u lumiya laakiin taasi waa inaan la dheereyn waqtiga.
Waa cunto kaloori aad u hooseeya marka waa inaad aad u taxaddartaa markay timaado raacideeda maadaama aysan bixin nafaqooyin muhiim ah.
Waxaa loo tixgeliyaa cunto mucjiso ah waxa ay leedahay saameyn soo celin muhiim ah, marka hadaadan caadooyinkaaga badalin waa hubaal taas miisaankaaga kordho oo kiilo badan oo lumay qaado.
Ma ahan cunno lagu taliyay oo haba yaraatee laguma talin karo kuwa leh dhibaatooyinka kelyaha.
Kahor intaadan dhammeyn, waa inaad taas ku xasuusataa cuntada cananaaska ayaa shaqeeya waxaadna heli kartaa natiijooyinka la filayo, marka ay dhammaato ayaa yidhi qorshaha miisaanka oo yaraada, waa inaad bilowdaa nooc ka mid ah cunto caafimaad leh oo dheellitiran oo lagu daro jimicsi yar oo jimicsi maalinle ah. Sidan ayaad uga fogaan doontaa saameynta dib u celinta ee laga baqo waxaadna awoodi doontaa inaad culeyska ilaaliso. Difaacayaasha cuntadan waxay xaqiijinayaan inay lumin karto qiyaastii 2 kiilo oo culeys ah seddex maalmood gudahood, waa sababta ay muhiim u tahay inaad tashato dhakhtarka nafaqada ama khabiir ku takhasusay ka hor intaadan bilaabin cunnadan oo markaa iska ilaali dhibaatooyin caafimaad oo daran. Khabiirka ayaa sameyn doona daraasad wuuna kuu sheegi doonaa haddii ay waxyeello leedahay iyo in kale bilaabaya noocan ah habka slimming.
Markaasaan kaa tegayaa fiidiyow si lagaaga caawiyo inaad waxbadan ka ogaato cuntada cananaaska canka caanka ku ah iyo maxay yihiin faa iidooyinkiisa iyo dhamaantood kahortaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cunto cananaaska
Tilmaamaha lagu farxo
Maxay muhiim u tahay inay waayeelka u tagaan dhakhtarka ilkaha?